Dabinka Dowlada Korneyl Cabdullahi Yusuf
Buluugleey, Saturday, September 03, 2005
Waxaa la helay xog badan oo ku saabsan qorshaha dowlada Korneyl Cabdullahi Yusuf. Waxaa la xaqiijiyey in korneylku u yeertay aqoon yahano ka soo jeeda beeshiisa oo ka soo qaxay wadamada reer galbeedka si ay u qorsheyaan dabino lagu doonayo in siyaasadii lixdameeyadii dib loogu soo celiyo Soomaaliya.
Korneylka waxaa lagula taliyey inuu isku wareejiyo aqoon yahanada reerkiisa si meesha looga saaro in siyaasada dalka aysan ka bixin qorshaha waqtiga dheer loogu talagalay. Sannadooyinkii lixdanka ayaa waxgarad badan oo ka soo jeeda gobolka Bari waxey dejiyeen qorshe dalka siyaasadiisa loogu keli-talinayo. Qorshahaas waxaa ku yimid dhabarjab kadib dhimashadii Madaxweyne Sharmarke oo dabinkii ay dhigeen ragaas uu sababay dilkiisa, iyagiina aysan wax badan ka dambeynin oo ay ku dhaceen dabinkii ay daadsheen.
Korneylku xoog kuma qabsan karo Muqdisho, lagamana yaabo ciidan Tigreeya iney guul kala kulmaan dagaal ay ka oogaan caloosha Soomaalida. Waxaa la saadaaliyey in qabqabta Cabdullahi Yusuf ay ka fog tahay dulaan uu ku qaado magaalada Xamar iyo degaankeeda. Korneylka waxaa u qorsheysan inuu cabsi geliyo dadweynaha Muqdisho si ay culaab u saaraan dagaaloogayaasha xamar iney ku mashquulaan difaaca degaankooda. Qorshaha daahsan waa in degaanka Jubada ay tahay tilmaanta tooska ee ujeedada duulaanka dagaalka uu damacsan yahay Cabdullahi.
Dabinka hadda dhigan waxaa loogu talagalay Korneyl Barre Hiiraale oo qorshahaas wejigiisa kowaad aan looga maarmin. Waxaad moodaa in isbaheysi beeleed marka hore lagu doonayo degaanka jubooyinka in milkiyadiisa lagula wareego, taas oo Barre Hiiraale ugu muuqan karta door weyn inuu qaato si loo soo nooleeyo isbaheysigii soo celin lahaa awoodii siyaasadeed ee beelaha ay tolwadaagta yihiin.
Siyaasada loogu cagajugleynayo Xamar waa in beelaha USCda aysan helin fursad ay uga fekeraan danaha dadkooda ku dhaqan gobolada Jubooyinka iyo ineysan milkiyada degaankaas aysan ku yeelan wax qeyba oo ay ku mutaan tixgelin mustaqbalka fog. Waxaana cad in beelahaas loo soo riixayo dhinaca Shabeele oo loogu talagalay iney xuduud noqoto. Webiga Jubba oo mara dhul hodona, kuna dhamaada degaanka xeebta dekeda Kismaayo ayey tahay danaha duulaanka Cabdulaahi, taas oo waafaqsan qorshihii ay dejiyeen siyaasiyiintii sannadihii lixdanka ee ka soo jeedey gobolka Bari.
Waxaa korneylka arrimahaas ku dhiiri geliyey inuu heysto dowladaha bixiya hubka la soo geliyo Soomaaliya, kuwaas oo ay ka mid yihiin Itoobiya, Yemen, Libiya. Wuxuu dhinaca ka soo horjeeda uu ka heysta xog iyo isagoo ka aaminsan ineysan jirin dowlado hubsiinaya iney soo iibsadaan mooye. Fursaduna ay tahay maanta in USCda qeybna lagu mashquuliyo dhismo dowladeed iyo dhaqaale badan oo soo socda, qeybo kalana lagu gilgilo dagaal si ay isdifaac ugu mashquulaan.
Dabinada Cabdullahi iyo dadka ku fekerkaa ay dhigayaan waxaa loogu talagalay inuu ku dhaco Barre Hiiraale si looga gooyo xiriirka uu la leeyahay beelaha dega xamar, dabadeedna la marsiiyo mudnaantiisa, degaankaasna uu dib ugu wareego gacanta Bari. Dagaaloogayaasha Xamar waxaa u qorsheysan Cabdullahi inuu dhuuni ku kala dilo si aysan u yeelan talo wadaag.
Siriqda Cabdullahi uu qotomiyey waxaa ku dhacaya ama Barre Hiiraale ama Cabdulaahi Yusuf, kolba labada nin waxaa gelaya dabinka waa ninkii siyaasada la ilduufto.
Dr. Saciid Ciise